Muungaab oo Muqdisho kula shiray saraakiil Taliyaani ah – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muungaab oo Muqdisho kula shiray saraakiil Taliyaani ah
Muqdisho – Mareeg.com: Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Sareeye Guuto, Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wafdi ka socday dowlada hoose ee dalka Talyaaniga.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo saraakiisha Taliyaaniga ah ayaa ka wada hadlay amaanka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho.
Mas’uuliyiinta ka socotay Dowlada Hoose ee dalka talyaaniga ayaa sheegay in xiriir soo jireen ah uu ka dhaxeeyo dowlada hoose ee dalka Talyaaniga iyo dowlada hoose ee magaalada Muqdisho.
Wafdiga ayaa ku amaanay gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo xubnaha la shaqeeyo howsha ay bilaabeen, iyagoo si gaar ah ugu amaanay muhiimada ay siinayaan amniga caasimada.
Gudoomiyaha G/banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Sareeye Guuto Xasan Maxamed Xuseen (Muungaab) ayaa dhankiisa soo dhaweeyay xubnahan, isagoo sheegay inay soo dhaweeynayaan wixii wax qabab ah oo ay ka geeysanayaan gobolka Banaadir.
Dhinaca kale, kulan ka dhacay xarrunta maamulka gobolka Banaadir ayaa looga hadlay arrimaha amaanka masuqmaaasuqa, waxaana laga soo saaray amar ku saabsan inaan qashin lasoo dhigi Karin waddooyinka caasimadda.
Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir, Maxamed Yuusuf Cusmaan ayaa sheegay in laga bilaabo maalinta Isniinta ah ee 17-ka Maarso wixii ka dambeeya aan la ololaan doonin in qashin jawaano ama baco ku jira la dhigo hareeraha waddooyinka Muqdisho.
Wuxuu sheegay Maxamed Yuusuf in tilaabo adag laga qaadi doono ciddii lagu helo arrimaha nuucaas ah, wuxuuna sheegay iney wadooyinka mari doonaan gaadiid qaadaya qashinka iyo gaadiidka ay ku xiran yihiin codbaahiyaal dadka u sheegaya ineysan qashinka dhigin hareeraha waddooyinka.
Sawirro: Milateriga Somalia iyo Jabuuti ee Alshabaab kala wareegay Buuloburte